မေတ္တာရေစင်: *အလှူ၊ ဆုတောင်းနှင့် အမျှဝေခြင်း*
သန်းခေါင်ယံ အမေးအဖြေ စာအုပ် အတွက် အလှူပါဝင်သူများ
1. ကိုအောင်ကျော်နိုင်+မခင်ဌေးကြူမိသားစု ဆစ္ဒနီမြို့၊ သြစတေးလျားနိုင်ငံ၊ မှ လှူဒါန်းငွေ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်။
2. မောင်ဝင်းမြင့်ဇော် (MIET) မော်စကို မှ လှူဒါန်းငွေ ဒေါ်လာ ၁၀၀။
3. ဒေါက်တာ တင့်ဇင်ဦး+ ဒေါ်ခင်သန္တာအေးမိသားစု mansfield,England ၂၀၀၀၀ ကျပ်။
4. မောင်ပြည့်စုံအောင် (SMTU) စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း ဒေါ်လာ ၅၀။
5. မောင်ကျော်စိုးသူ (SMTU) စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း ဒေါ်လာ ၅၀။
ကိုဝင်းမြင့်ဇော်ရဲ့ ဆုတောင်းနဲ့ အမျှဝေမှုလေးပါ…။
ဘုရား တပည့်တော် ဤသို့ယခု ပြုခွင့်ရသော ဒါန အကျိုး အားကြောင့် ဘုရား တပည့်တော် အားထုတ်ဆဲ ဖြစ်သော ရုပ်နာမ် ဓမ္မတို့၏ ဖြစ်မှု၊ ပျက်မှု ကိစ္စ၌သိသော ကိစ္စဉာဏ်သည် ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ငြိမ်း ရုပ်သိမ်းသည့် အသင်္ခတ အငြိမ်းဓာတ် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက် ပြုသည့် ကတဉာဏ်သို့ ကျေးဇူး ပြုကြောင်း အထောက်အပံ့ ဖြစ်ရပါစေ...
ဤသို့ယခု ပြုရသော ဒါနကုသိုလ် အဖိုးပါဒကို ကျေးဇူး ကြီးမားလှသော မိဘ၊ ဆရာသမား တို့အား လည်းကောင်း၊ ယခု ကော့မန့် ဖတ်ရှု နေသော သူတော်ကောင်း ဓမ္မမိတ်ဆွေ တို့နှင့် တကွ (၃၁)ဘုံ ကျင်လည် နေကြကုန်သော သတ္တဝါ အပေါင်းတို့အား လည်းကောင်း ဘုရား တပည့်တော်နှင့် ထပ်တူ ထပ်မျှ ရကြပါစေ အမျှ ပေးဝေပါ၏။
ဤအမျှရကြ၍ အားလုံးသော သူအပေါင်း တို့သည် သစ္စာလေးပါး တရားတော် မြတ်အား ထိုးထွင်းသိ၊ ပိုင်းခြားသိခြင်း အကြောင်းသို့ ကျေးဇူး အထောက်အပံ့ ပြုနိုင်ကြ ပါစေသတည်း။
အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာ၍ အေးမြကြပါစေ..
ဒါကတော့ ကိုဝင်းမြင့် ဆုတောင်းနဲ့ အမျှ ဝေတာလေးကို သဘောကျ အတုခိုးလို့ ကျွန်တော် ဖိုးသား (ပြည့်စုံအောင်)ရဲ့ ဆုတောင်း အမျှဝေတာလေးပါ…။
>>> ဤကောင်းမှု ကုသိုလ်ကံ စေတနာ တို့ကြောင့် တပည့်တော် အားထုတ်ဆဲ ဖြစ်သော ၀ိပဿနာ ဉာဏ်သည် လျင်မြန်စွာ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်သို့ ကျေးဇူး ပြုသောအားဖြင့် ပဋိသန္ဓ နေခြင်း၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်းတို့၏ ကင်းရာ၊ ကုန်ရာ၊ ချုပ်ရာ၊ ငြိမ်းရာ ဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက် ပြုရပါလို၏ အရှင်ဘုရား။
>>> ဤသို့ ပြုရသော ဒါနကုသိုလ်၏ အဖိုးပါဒကို မွေးသမိခင် ဒေါ်မြင့်အုန်းနှင့် ကွယ်လွန် သွားရှာလေ ပြီးသော ဖိုးသား၏ ဖေဖေ (ဦးကြည်လှိုင်) တို့အား လည်းကောင်း၊ ကိုယ်စောင့်နတ်အား လည်းကောင်း၊ ကျေးဇူးကြီးမား လှသော သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာတို့အား လည်းကောင်း၊ ၀ိပဿနာ အလင်းတန်းကို ထိုးထွင်းသိ၊ ပိုင်းခြားသိအောင် အစ်ကိုလိုတစ်မျိုး၊ ဆရာလိုတစ်သွယ်၊ မိတ်ဆွေလိုတစ်ဖုံ နည်းစုံအောင် သွန်သင်ဆုံးမ လမ်းညွှန်ပေးခဲ့သော အစ်ကို ၀င်းမြင့်အား လည်းကောင်း၊ ဖိုးသား ဟူသောနာမည်၏ ဖန်ဆင်းရှင် ဆရာတော် အရှင်နာယကာလင်္ကာရ အားလည်းကောင်း၊ ကွယ်လွန်လေပြီးသော ဖိုးသား၏ ဘိုးဘွားတို့အား လည်းကောင်း၊ ကွယ်လွန်လေပြီးသော အမေရဲ၊ DSA အပတ်စဉ် 45 မှ ကိုဖုန်းကိုကိုနှင့် DSTA အပတ်စဉ် 8 မှ ကိုကျော်ထင်လင်း တို့အားလည်းကောင်း၊ ယခုကော့မန့်ဖတ်ရှု နေသော သူတော်ကောင်း ဓမ္မမိတ်ဆွေ တို့နှင့်တကွ (၃၁)ဘုံ ကျင်လည်နေကြ ကုန်သော သတ္တဝါအပေါင်းတို့အား ဘုရားတပည့်တော် ဖိုးသားနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ရစေခြင်းငှာ အမျှပေးဝေပါ၏။
>>> ဤ အမျှပေးဝေမှုကို ရရှိကြကုန်သော ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါ အပေါင်းတို့သည် သစ္စာလေးပါး တရားတော်မြတ်အား ထိုးထွင်းသိ၊ ပိုင်းခြားသိနိုင်ခြင်း အကြောင်းသို့ ကျေးဇူးပြု၊ အထောက်အပံ့ ပြုနိုင်သည် ဖြစ်ပါစေကြောင်း ဖိုးသားမှ အဖြူရောင်မေတ္တာများနှင့် ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ရအောင်လည်း ကျင့်ကြံကြိုးကုတ် အားထုတ်နိုင်သည် ဖြစ်ပါစေသား။
>>> အားလုံးပဲ မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆ မြဲမြံသော သတိတရားတို့ဖြင့် ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။
>>> သန်းခေါင်ယံ အမေး အဖြေ စာအုပ်က ဘုန်းဘုန်းကောဝိဒ (မြိတ်) ရေးသား တာပါခင်ဗျာ..။ အားလုံးပဲ အမျှရ၍ သာဓု ခေါ်နိုင်ကြပါစေ...။
3/8/2009, SUN:, 6:48:42 PM
Posted by ဖိုးသား at 18:50